GANACSADE AXMED CISMAAN GEELE IYO ARIMAHA TAAGAN! – hogaanka.org
Caqligii Wanaagsan Itaal Inuu Ka Roonyahay Bal Eegoo U Fiirsada Q:2 aad
Waxaa aan Jecelahay in aan rayi geyga ku darsado qoraal kan yar oo aan u maleynayo inuu soo koobayo sida aan anigu u arko sheekada Axmed iyo Jabuuti iney ku haboon tahay in loo wajaho.
Ugu horeyn ma rabo in aan faalo ka bixiyo dacwada la sheegey in Axmed iyo dalka Jabuuti u dhaxaysa oo anigu xogogaal uma ihi waxaa laysku haysto iyo waxaa ka jira Waayo?
Mudane Axmed Cismaan oo Media ha hadlay oo leh Dawlada Jabuuti ayaa dacwad igaga furan tahay ma maqal melena kuma arag qoraal iyo cod uu lee yahay oo uu ku muujinayo arintaa.
Go’aan qodobeysan oo maxkamada la aqoon yahay soo saartey oo xaqiiqo aan odhankaro 100% waa mid run ahna ma arag mana akhriyin sidaa darteed arintaa maadaama aanan labada dhinacba war iyo wacaal sugan oo ay ku xaqiijinayaan aanan ka haynin in aan wax ka sheegaa waa igu dambi sidaa darteed waxaa aan qudha oo aan qoraalkeygan kaga hadlayaa in bal hadii arin noocaas ahi dhacdo sharciyan sida loo furdaamin karo iyo sida ay muhiim u tahay in loo ilaaliyo sharafta Qaranka Somaliland.
Ganacsade Axmed Cismaan :
Ganacsade Axmed Cismaan waa muwaadin Somaliland ah,Waxaana uu lee yahay xuquuqda sharci ee muwaadinka Somaliland lee yahay ee ku xusan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka.
Sidaa darteed Xuquuqdiisa dhinac kastaba waxaa ilaalinaysa Dawlada Somaliland sida:
Hadii uu dalka gudihiisa joogo iyo hadii uu debidiisa joogo ba.
Muwaadin Somaliland ah hadii dacwadi kaga socoto dal debeda ka ah dalkiisa ama lagu xidho waxaa dalkaasi ama maxkamadaasi la dacwoonayaa waa wasaarada arimaha debeda ee Somaliland oo xidhiidh la sameyneysa Wasaarada arimaha debeda ee dalkaasi uu muwaadinka Somaliland ku xidhan yahay ama gartiisa lagu qaadayo,Markaa dawlad iyo dawlad ayaa arintu noqoneysaa, iyada oo lagu dhaqmayo qaynuunka caalamiga ah (International Law).
Sidaa darteed iyada oo Somaliland Dawlad lee dahay yaanba la aqoonsane in Ganacsade Axmed arintiisa saraadiin,odayaal reer ku cumaamadani ka hadlaan waa arin aad u liidata oo weliba xamaasad iyo hanjabaad dusha lagaga tuuro qaranka Somaliland arintaasi waxay jidkeeda mari lahayd:
Odayda Beesha arab hadii ay doonayaan qaab dhaqan in arinta loo xalilo waa in ay beesha Ciise gaar ahaan jilibka madaxweyne geele garta u dhigtaan oo arinta beel beelka dhigaan iyo arin dhaqan balse hadii dawlad muwaadinkeeda difaacda la doonayo horta waa in la hubiyaa sida ay wax u jiraan,cida haysatad Axmed ka dibna si qaranimo ah loo wajahaa xaalada ganacsade Axmed oo gartiisa la gala,cadaaladna lagu gala si wadajirna loo xaliyaa balse inta odayaal arinta reereenayaal qaranka meeli ugama banana arinta ee reerahu sharciyadooda dhaqan ha ku xaliyeen oo Ismaciil Cumar Geele iyo Axmed Cismaan Geele odaydoodu ha ku dhexgaleen xeerarka beelahooda,Somaliland iyo Dawladeedana faraha halaga qaado hadiise la rabo in dawlad iyo dawlad loo garamo oo Axmed arintiisa lagu furdaamiyo shuruucda qaranka Somaliland iyo kuwa caalamiga ah ee ilaalinaya xuquuda muwaadinka Somaliland ,Axmed waxaa la gudboon inuu dacwadiisa u gudbiyo wasaarada arimaha debeda ee Somaliland,si wasaarada arimaha debeda ee Jabuuti u diyaariso jawiga loo qaadayo dacwadaha ku saabsan Axmed si shuruucda caalamiga ah loo waafajiyo labada sharci ee labda dal.
Sidaa darteed Mudane Axmed waxaa difaaci kara waa qaranka Somaliland iyo shuruucdiisa,waana muhiim in Axmed sharcigu difaaco naftiisa iyo maalkiisa intaba,waanuna eegi doonaa xaalada Axmed balse Qaab ku dhisan Reer laguma difaaci karo qadiyada Axmed ee waa in aynu Qaran ku difaacnaa.
Waad Mahadsantihiin Dhamaan
Caqligii Wanaagsan Itaal Inuu Ka Roonyahay Bal Eegoo U Fiirsada Q:2 aad Previous
Facebook removes exposed user records stored on Amazon’s servers Next